Itiyoo-Ertiraa: Badhaasa warqee maraa Isaayyaas Afawarqiif - BBC News Afaan Oromoo
Itiyoo-Ertiraa: Badhaasa warqee maraa Isaayyaas Afawarqiif
Madda suuraa, EBC
Badhaasa kana kanan kenneef jedhan haati kun, tokkoffaa tokkummaa fiduuf jedhanii namoonni keenya waan ta'uufi hin taaneen hedduun dhumaniiru. Lammaffaa ammoo nagaa bu'eef miirkoo ibsachuuf. Sadaffaa ammoo amma ijoolleen Oromoo ga'an mullisuuf jedhan.
Gosa warqee badhaasa kennan kanaa gaafatamanii Adde Angaatuu Hayilee warqeen kun warqee qulqulluu Wallaggaa, Dambi Dolloo keessaa ba'udha jedhan.
Gaaffii warqeen kennaa Pirezedanti Isaayyaasiif kennan kun giraama meeqa ta'a jedhameef, akka giraamaan hin beekamne himanii, "Warqeen biyya keenyaa waqeetaan beekama. Warqeen kun waqeeta lamadha."
Haati kun tilmaam qarshii warqeen kun baasuu danda'us himuun hin barbaachisu jedhan. Kun jedhan, qarshii hanga kanaa baasa jechuu osoo hin taane keessa kee, maalummaa kee agarsiiisuuf kan ta'udha jedhan.
"Kennaan qarshiin hin tilmaamu. Qarshii yeroo hundaa ni argatta, yeroo hundaa ni dhabda. Garuu horii miti waanti guddaan. Anaan sabni keenya maali kan jedhu mullisuuf kana kan na gochisiise malee," jedhu Aadde Angaatuun.
Pirezedaantii Ertiraa Isaayyaas Afawarqiif bakka itti badhaasa warqee kana kennaniif Maasaraa Mootummaa kan galuu danda'an beellama qabsiisanii eyyamsiisuun akka ta'e kan dubbatan Aadde Angaatuun kennaa kana kennuuf ofumaan akka kaka'anis ibsaniiru.
Pirezedaanti Isaayas akka biyya isaanii daawwattaniif isin afeeraniiruu kan jedhuuf, "Kanaan booda Ertiraan biyya kooti. Yoo barbaanne konkolaataan yookaan xiyyaaraan deemuu ni dandeenya," jedhan.
Badhaasa Pirezedaanti Isaayyaasiif erga kennanii booda namoonni hedduu akka bilbilaniif himanii, guyyaa sana hanga alkan keessaa saatii sadetiitti ergaa bilbilaa keessumsiisaa turuu dubbatu. "Alkan hanga sadetiitti ergan keessumeessee booda dadhabeen rafe," jedhan.
Bilbilli yeroo baayyee bilbilamuurraa kan ka'een chaarjii waan dafee dafee fixatuufis bilbila lamaanan fayyadama jedhan.
Bilbilli bilbilamuun hanga ar'aatti akka hin dhaabbatiin jirullee dabalanii himaniiru Aadde Angaatuun.
Abbaan Taayitaa Daandiiwwan Itoophiyaa nageenya daandiiwwan gara Ertiraa geessan ifa baasera. Dhugum daandiiwwan kuni amansiisoo dha?
Eertiraan hariiroo Itoophiyaa waliin jalqabde cimsuuf waggota 20 booda Imbaasishee haaressuun finfinneetti bante. Kun maal akeeka?
Tibba kana dhimmoota gurguddoo qalbii uummataa hawwataa jiran keessaa Itoophiyaafi Ertiraan hariiroo tolfachuuf daawwannaa Pirezedaanti Isaayyaas Afawarqii Itoophiyaatti taasisaa jiraniifi ergaawwan aanga'oonni kun dabarsaa jiranidha.
Naannoo Amaaraa Aanaa Dawwee Haarawaatti maaltu ta'e?
Mootummaan naannoo Amaaraa godiina addaa saba Oromootti namoota "miseensoota garee Shaneeti" jedhe to'achuusaa beeksise. Jiraattoonni BBCn haasofsiise garuu "Ijoollee kana isintu nyaachisaa fi itti hidhaa jira jechuun uummani baay'ee dararamaa jira" jedhu.
'Falli rakkoo hamaa Itoophiyaan keessa jirtuu anga'oonniifi mormitoonni walitti fufiinsaan mari'achuudha' jedhe dhabbanni Kiraayisiis Giruuppi jedhamuun beekamu.
KALLATTIIN Itoophiyaatti lakkoofsi namoota Covid-19n qabaman 6,564 gahe
Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa sa’aatii 24 darbe namoota 2,192 qoratee namoota 178 irratti vaayirasicha argachuu hime. Hanga yoonaa qorannoon koronaavaayirasii Itoophiyaatti taasifame 263,897 kan gahe yoo ta'u kana keessaa namoota 6,564 irratti argamuun isaa mirkanaa'eera.
''Ijoolleen keenya eessa, maal keessa akka jiran hin beeknu'' -Haadha Warraa Obbo Baqqalaa
Obbo Jawaariifi Obbo Baqqaalaan mana murtiitti dhiyaatani
Obbo Jawaariifi Obbo Baqqaalaan mana murtiitti dhiyaatanii guyyaa gara garaatti bellamaman.
'Ertiraan akka ammaa kanatti dhimma Itoophiyaa keessa galuu waan hin dandeenyeef lola jalqabde'
Hokkarri uumamuun 'marii Hidha Guddichaa Abbayyaa boodatti hambise'